Amaphupho ngomndeni nezihlobo – iAfrika
Amaphupho ngomndeni nezihlobo
Asho ukuthini amaphupho ngomndeni noma izihlobo? Lokhu kuhlanganisa izingane ezincane, abafowenu noma odadewenu, abantwana, abazali, omamezala noma obabezala, omkhulu noma ogogo kanye namakhosikazi/abayeni.
Tags Izihlobo, Umndeni
Amaphupho ngezihlobo ezikude
Uma uphupha ukuthi izihlobo zakho ezikude sezashona uzoba nenhlanhla maduzane. Uma uphupha ukuthi zisaphila uzothola izindaba ezimbi maduzane kakhulu.
Uma uphupha ukuthi umama wakho nobaba wakho sebashona bobabili kusho ukuthi uzothola usizo maduzane kumuntu noma endaweni engalindelekile.
Uma uphupha ukuthi ubona umshana wakho kusho ukuthi uzobona izihlobo maduzane futhi zizokusiza ngenkinga empilweni yakho. ▪️Amaphupho ngezihlobo ezikude.
Uma uphupha ubona umamezala wakho kuyibhadi. Uma ekuthethisa kusho ukuthi awuzukuba nenjabulo futhi uma ekuphethe kahle kusho ukuthi uzodumala maduzane. ▪️Amaphupho ngomama.
Uma uphupha ukuthi unengxoxo emnandi nomama wakho kusho ukuthi uzoba nenjabulo nempumelelo. Kungenzeka futhi uthole izindaba ezimnandi maduzane. Uma umama wakho eshonile ephusheni lakho kungenzeka agule maduzane. Mkhuthaze ukuthi ashintshe indlela enza ngayo. Amaphupho ngomamezala Amaphupho ngobaba
Uma uphupha ubona ukhokho wakho ongowesifazane kusho ukuthi kunenkathazo ezayo.
Uma uphupha ukuthi ubabezala ushonile kusho ukuthi uzoba nebhadi maduzane. Kubi kakhulu uma ekusongela noma ekuphatha kabi. ▪️Amaphupho ngobaba.
Uma uphupha ukuthi ukhuluma nobaba wakho kusho ukuthi uzoba nenjabulo. Uma engakhulumi futhi engakuphenduli kusho ukuthi uzohlangabezana nezinkinga maduzane. ▪️Amaphupho ngobabezala. ▪️Amaphupho ngomama.
Amaphupho ngokuhlangana komndeni
Uma uphupha ukuthi umndeni wakho uhlangene kusho ukuthi kufanele uziphathe kahle kungenjalo uzozithola usenkingeni.
Uma uphupha ubona umntwana kusho ukuthi wena noma uphathina wakho nizoba nengane maduzane. Uma usukhulelwe vele kuwuphawu oluhle ngokubelethwa kwengane. Uma uphupha ngabantwana abaningi uzophumelela emsebenzini nasempilweni. Amaphupho ngezingane ezincane. Amaphupho ngamawele.
Amaphupho ngomfowenu noma udadewenu
Uma uphupha ukuthi ubona umfowenu noma udadewenu kusho ukuthi kuzoba noshintsho empilweni yakho maduzane. Kungaba nobunzima emndenini kodwa uzophila impilo ende emva kokuqeda ukuzila.
Tags Abafowenu, Odadewenu, Umndeni
Uma ubona ingane encane ephusheni lakho ilele ngamadolo kungasho ukuthi uzoba nesivakashi maduzane. Uma ingane izichamela noma izingcolisa uyibambile, lokho kungakhomba inhlanhla uma wena ingakungcolisi kodwa kukhombe ibhadi uma ingane ikungcolisile. Uma uphupha umuntu obuthandana naye elethe ingane yenu kuwe, lokho kungasho ukuthi kukhona inkulumo esele noma loyomuntu usenesifiso sokuthi niwuqale phansi umlilo wothando niwubase. … Read more
Amaphupho ngonkosikazi noma umyeni
Uma uphupha ubona umyeni noma unkosikazi wakho, kusho ukuthi uzophumelela ezintweni ozenzayo – ikakhulukazi emsebenzini. Uma ungowesifazane oshadile uphupha ukuthi ulwa nomunye wamakhosikazi omyeni wakho, kusho ukuthi uzama ukunihlukanisa nomyeni wakho. Uma uwina manilwa, kusho ukuthi imizamo yakho ayisebenzi noma umuthi wakhe awunawo amandla anele.